Sesam : Hetsika ho an’ny haiady -
AccueilVaovao SamihafaSesam : Hetsika ho an’ny haiady
Sesam : Hetsika ho an’ny haiady
11/08/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nanomboka omaly ary hifarana ny alahady izao. Tanterahina etsy amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano ny hetsika « Sesam » na Sports Extrêmes et salon des arts Martiaux. Manaitra avy hatrany raha vao miditra ny kianja mitafo ny ringa lehibe ho an’ireo karazana haiady. Manodidina izany dia misy ireo trano heva samihafa ahitana ireo mpamatsy ireo kojakoja sy fitaovana ilaina amin’ny fanatanjahantena, ary ireo karazana haiady samihafa misy eto amintsika. Ireo klioba nahazo alalana avy amin’ny federasiona misy azy avy no mandray anjara amin’izany hetsika izany. Amin’ny ankapobeny, dia natao hampiroboroboana sy hampahafantarana ireo taranja samihafa eo amin’ny haiady ny hetsika. Hita ao amin’ireo trano heva ireo ny sary sy fampahafantarana samihafa ireo taranja ireo.
Ho an’ireo firenena niandohan’ny taranja haiady sasany, dia efa tafiditra amin’ny kolontsaina ny fanaovana ireny fanatanjahantena ireny. Ho an’ny taranja Aiki Do dia tafiditra amin’ny fandrasain’anjaran’izy ireo amin’ity hetsika ity ihany koa ny fampirantiana sy ny fampianarana ny kolontsaina Japoney toa ny « Origami » sy ny « Ikebana ». Ny « Origami » moa raha tsiahivina dia fanamboarana endrin-javatra iray miainga avy amin’ny famoretana taratasy, ary fandrariana ny voninkazo hitondra filaminan-tsaina kosa ny « Ikebana ».
Tafiditra ao anaty fandaharam-potoanan’ny mpikarakara ao anatin’ny 3 andro ny fanehoana eo amin’ny ringa ireo karazana haiady misy sy hita eto amintsika. Hisy ihany koa ny fifampitsapana eo amin’ny taranja samihafa amin’ny andro farany.
Tsy diso anjara amin’ity hetsika ity ihany koa ireo fanatanjahantena ao anatin’ny sokajin’ny « Extrêmes » toa ny « Skateboard », « Rollers »…
Am-perinasa ankehitriny ilay toby misy ireo vondron-tafika manokana hifanandrina amin’ny malaso, any amin’ny tapany atsimon’ny Nosy. Napetraka tamin’ny fomba ofisialy omaly ny foiben’ireo Kômandô hiady amin’ny dahalo, ka ao Ihosy no foibe toerana misy izany. ...Tohiny